Ajaaniib ay dableydu ka afduubteen hoteel Mexico ku yaal oo ay booliisku badbaadiyeen
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Ajaaniib ay dableydu ka afduubteen hoteel Mexico ku yaal oo ay booliisku badbaadiyeen
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Kuba Cuba • Wararka Dowladda • Wararka Haiti • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Mexico • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Sida laga soo xigtay saraakiisha Mexico, kooxda la afduubtay waxaa ku jiray 16 qof oo u dhashay Mexico iyo 22 ajaanib ah, oo ay ku jiraan saddex carruur ah iyo haweeney uur leh.
Koox ajaanib ah ayaa laga afduubtay hoteel ku yaal waqooyiga Mexico.
Booliiska Meksiko ayaa markii dambe helay dhibbanayaashii oo nool oo ay ka tageen kooxihii haystay.
22 Haiti iyo Cuba waxay noqon karaan magangalyo -doon ama muhaajiriin.
Koox ka kooban 16 qof oo reer Mexico ah iyo 22 Haiti iyo Cuba ah ayaa la badbaadiyay ka dib markii laga afduubtay Hotel Sol y Luna oo ku yaal magaalada Matehuala, oo ku taal gobolka waqooyiga Mexico ee San Luis Potosi.
Dacwad oogaha guud ee gobolka ayaa ku dhawaaqay in dhibanayaasha ay booliiska gobolka ka heleen iyagoo nool waddada dhinaceeda, sida muuqata ay ka tageen dadkii afduubtay.
Sida uu sheegay Xeer -ilaaliye Federico Garza Herrera, kooxda waxaa ku jiray 16 reer Mexico ah iyo 22 muwaadiniin ajnabi ah, oo ay ku jiraan saddex carruur ah iyo haweeney uur leh.
Wali ma cadda in ajaanibtu ay yihiin magangalyo doon ama muhaajiriin.
Warbixinnadii hore waxay tilmaamayaan in qaar ka mid ah dadka la afduubtay ay u dhasheen Venezuela.
Mas'uuliyiinta socdaalka Meksiko waxay hubinayeen xaaladdooda Mexico iyadoo saraakiisha boolisku ay ka shaqeeyeen sidii loo heli lahaa dhiiri -gelinta afduubka.
Afduubka ayaa ka dhacay at Matehuala hoteelka horaantii Talaadada.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in saddex gaari oo nooca xamuulka qaada ah oo ay saaran yihiin rag hubeysan ay yimaadeen waaberigii Hotel Sol y Luna ayna afduubteen martidii.
Qaar ka mid ah dukumentiyada aqoonsiga dhibanayaasha ayaa laga helay qolalka dhexdooda. Afduubayaasha ayaa sida muuqata sidoo kale qaatay qorigii martida ee hoteelka.
Dadka la qafaashay ayaa markii dambe waxaa helay Ciidanka Qaranka iyo saraakiisha booliiska waddo ka baxsan Matehuala kadib markii qof soo wacay uu sheegay in koox dad ah ay gargaar weydiisanayaan waddada.